कसरी चलाए नरेन्द्रले कार? अत्तरीयामा रोकिएको ट्रकमा ठोकिँदा सुनिताको मृत्यु, उनी आइसियुमा – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/कसरी चलाए नरेन्द्रले कार? अत्तरीयामा रोकिएको ट्रकमा ठोकिँदा सुनिताको मृत्यु, उनी आइसियुमा
कसरी चलाए नरेन्द्रले कार? अत्तरीयामा रोकिएको ट्रकमा ठोकिँदा सुनिताको मृत्यु, उनी आइसियुमा
कैलालीको अत्तरियामा एक भयानक दुर्घटना भएको छ । त्यहाँ रोकि राखेको ट्रकमा ठोकिएको छ । घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाईते भएका छन् । गोदावरी नगरपालिका २ खानेपानी ट्याँकी नजिक रोकिएको से १ ख १७३१ नम्बरको ट्रकमा बा १४ च ४६३४ नम्बरको कार ठोकिदाँ सुर्खेत घर भएकी सुनिता पुन मगरको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घटनामा परी गम्भिर घाईते भएकी मगरको गएराति सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । कारका चालक कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर ५ वनसमितिका रहेको बुझिएको छ । उनी ३५ वर्षिय नरेन्द्र कुँवर हुन् । नरेन्द्र समेत घाइते भएका छन् । उनको अबस्था केही गम्भिर रहेको छ ।
अहिले उनको धनगढीको निसर्ग अस्पतालमा आइसियुमा उपचार भैरहेको छ । दुर्घटनाको कारण तिब्र गति रहेको प्रहरीको प्रारम्भीक अनुमान छ । तर थप अनुसन्धान भै रहेको प्रहरीले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा सो क्षेत्रमा सवारी दुर्घटना पहिलेको तुलनामा केही बढेको छ । सांकेतिक तस्वीर
जुम्लामा बेवारिसे शव फेला